ओसामा मारिएको भिडियो हेर्ने हो ? | गणेश कार्कीको ब्लग
« लादेनलाई मारेको ओबामाले लाइभ यसरी हेरे भालुको कन्पट जस्तो ‘गृह’, छोड्नु न समात्नु »
santosh niroula, on May 4, 2011 at 2:04 pm said:
But where is video?
rakesh, on May 4, 2011 at 3:13 pm said:
म पनि हिजो निकै नै झुक्किएँ । मुर्ख भइयो जस्तो त हिजो नै लागेको थियो हो रैछ । धन्यवाद पानीफाटो
paniphoto, on May 4, 2011 at 7:54 pm said:
read the full story plz